Digniin lagasoo saaray Daawo la sheegay in loo sameeyay Coronavirus – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dhageyso:- Barnamijka Wareegga Wararka 24-Ka Saac Ee Radio Dalsan 19/05/2022
Digniin lagasoo saaray Daawo la sheegay in loo sameeyay Coronavirus
Hay’adda caafimaadka adduunka (WHO) ayaa sheegtay in aanay jirin dawo la xaqiijiyay in lagu dabiibi karo cudurka Covid-19, kadib markii uu madaxweynaha Madagascar soo bandhigay dawo dhireed uu sheegay inay ku fiyoobaanayaan dadka qaba faysarka Corona.
Mac-hadka dawooyinka qaran ee dalkaasi ayaa sidoo kale shaki geliyay waxtarka dawada uu soo bandhigay madaxweyne Andry Rajoelina.
Mac-hadka ayaa sheegay in dawo dhireedkaasi ay khatar gelin karto caafimaadka dadka, maadaama aan qaab cilmiyeysan loo hubin waxtarkeeda.
Dawada oo qaab sharoobo ah ayaa si bilaash ah loogu qeybiyay dadka ugu nugul dalkaasi.
Sharoobada uu madaxweyne Andry Rajoelina sheegay inay dawo u tahay Covid-19 ayaa laga sameeyay dhirta loo yaqaan artemisia ee qeyb ahaan kamid ah dawada lagu dabiibo cudurka malaariyada iyo dhir kale oo ka baxdawaddankaasi.
Agaasimaha madaxtooyada Madagascar, Lova Hasinirina Ranoromaro, ayaa BBC u sheegtay in ku dhawaad 20 qof muddo saddex todobaad ah lagu tijaabinayay dawadan.
Madaxweyne Rajoelina ayaa sheegay in laba qof ay si buuxda ugu dawoobeen sharoobada uu ku tilmaamay “shaah dhireed”.
“Waa in carruurta ardayda ah ay cabbaan….. xig yar ay maalintiiba ka cabbaan,” ayuu madaxweynaha u sheegay diblomaasiyiin iyo madax kale oo kasoo qeybgalay soo bandhigidda dawadan.
Jasiiradda Madagascar oo dhacda badweynta Hindiya ayaa diiwaangelisay 121 kiis oo Covid-19 ah, iyadoo aanay jirin cid la sheegay inay u dhimatay cudurka.
Hay’adda WHO oo ka jawaabaysa dawada Madagascar ayaa sheegtay in aanay ku talineyn in la qaato dawooyin aan la hubin si looga hortago ama la isaga daweeyo cudurka Covid-19.
WHO ayaa tilmaamtay hadal uu horay u jeediyay ninka madaxda ka ah ee Tedros Adhanom Ghebreyesus, kaasoo ahaa in dedal badan oo caalami ah loo baahan yahay si loo helo dawo waxtar u leh bukaannada fayraska Corona.
Ms Ranoromaro ayaa sheegtay in madaxweyne Rajoelina uu fahansan yahay diidmada WHO, balse arinku yahay mid khuseeya madaxbannaanida dalkiisa.
“Waxa ay mas’uuliyad ka saaran tahay shacanka dalkiisa,” ayay tiri.
Maxay ka wada hadleen Madaxweynayaasha Somalia iyo Turkiga?